Mogadishu Journal » 2018 » December » 15
City iyo Bayern oo ku dagaallamaya saxiixa laacib ka tirsan Napoli
Kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Bayern Munich ayaa si aad ah u baacsanaya laacibka kooxda Napoli khadka dhexe kaaga ciyaara ee Allan, balse kooxda ka dhisan dalka Italy ayaa caddeysay inuusan ciyaaryahankan iib ahayn. CalcioNapoli24 ayaa waxa ay werrineysaa in Napoli...
Barcelona oo u dhaqaaqeysa saxiixa laacib ka tirsan Chelsea
Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay dooneysaa inay lasoo saxiixato difaaca Chelsea gadoodka ka ah ee Andreas Christensen marka uu furmo suuqa January. Sida uu daabacay wargeyska Sport ee kasoo baxa Spain, Barca ayaa diyaar u ah in laacibkan ay u dhaqaaqaan saxiixiisa...
Xildhibaanno taageersan madaxeweyne Farmaajo oo Muqdisho ku shiray
Mjournal :-Qaar kamid ah xildhibaanada golaha Shacabka Soomaaliya ayaa muqdisho ku qabtay shir jaraa’id oo ay ku muujiyen sida ay kaga soo hor jeedaan mooshinka laga keenay Madaxweyne Farmaajo. Bayaanka kasoo baxay shirka xildhibaanadaani ay ku yeesheen Muqdisho ayaa u qornaa...
Wararkii ugu danbeeyay ee saakay magaalada Baydhabo
Mjournal :-Xaalaada Magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa u muuqata mid maanta ka yara degan sidii labadii cisho ee la soo dhaafay. kadib markii labbadii maalin ee ina dhaaftay ay ka taagneyd xiisad ka dhalatay soo xiritaankii...
Guddoomiye Mursal : Waa deg deg loo sii daayaa Mukhtaar Rooboow
Mjournal :-Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal oo maanta shir jaraa’id ka qabtay shaqaaqada ka socota arrimaha doorashada koonfur galbeed ayaa ugu horeyn u tacsiyeeyey dadkii Baydhabo ku dhintay, isaga oo intaas raaciyey in Mukhtaar Roobow uu yahay muwaadin xaq u leh...
Ilaalada la-taliyaha gudoomiyaha BFS oo hubka laga dhigay
Mjournal :-Wararka soo baxaya ayaa sheegay in la taliyaha Sare ee Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya C/qaadir Maxamed Nuur Jaamac, laga dhigay hubkii ay wateen illaadiisa iyo gaadiid cabdi bile ahaa oo ka mid ahaa kuwii isaga lagu ilaalin jiray. C/qaadir Maxamed Nuur Jaamac, ayaa...
AMISOM oo iska fogeysay ku lug lahaanshaha xariga Mukhtaar Rooboow
Mjournal :-War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa looga hadlay xiisada siyaasadeed ee kasoo cusboonaatay Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana walaac xoogan loogu muuiiyay xiisada ka dhalatay soo xiritaanka Muklhtaar...